रक्तचापपीडितलाई लसुन कति उपयोगी ? - Everest Dainik - News from Nepal
रक्तचापपीडितलाई लसुन कति उपयोगी ?
काठमाडौं, साउन २३ । अझै बूढापाकाहरू गाउँघरमा दिनहुँ लसुन खाने सल्लाह दिन्छन् । उहाँहरूको अनुभवलाई भने अव विज्ञानले समेत सही ठहराएको छ ।
याे पनि पढ्नुस पूर्वमन्त्री सिंहको निधन
विशेषज्ञहरूका अनुसार लसुनको प्रयोगभन्दा अघि चिकित्सकको सल्लाह भने अवश्य लिनुपर्छ किनभने यसको उपयोगले रगत पातलो हुनु सक्छ । सँगै यो पनि भनिएको छ कि अनुसन्धान एउटा सानो समूहमा गरिएको उपचार छोडेर मात्र लसुनमा निर्भर नगर्नुस् । यो सामाग्री कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।
याे पनि पढ्नुस प्याजपछि लसुनको मूल्यले बनायो नयाँ कीर्तिमान
ट्याग्स: रक्तचाप, लसुन